Somaliland: Shirkadda HEMA BOOKS Oo Ka Jawaabtay Dhaliilo Loo Jeediyay Doorkeeda Daabacaadda Manhajka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shirkadda HEMA BOOKS Oo Ka Jawaabtay Dhaliilo Loo Jeediyay Doorkeeda Daabacaadda...
Shirkadda HEMA Books Ayaa war qoraal ah ooay shalay warbaahinta u qeybisay iskaga difaacday eeddo ka dhan ah shaqadeed iyo adeega ay qabato kuwaas oo ays heegtay in aanay waxba ka jirin. Qoraalkan oo uu wargeska HUBAAL nuqul kamid ah helay waxaa uu u dhignaa sidan: “Maalmihii u dambeeyay warbaahinta kala duwan waxa lagu baahinayay oo ku soo baxay eedo loo jeedinayo Shirkadda HEMA BOOKS oo ka shaqaysa faafinta iyo fidinta aqoonta, keenista buugaagta waxtarka leh, soo-saaridda dhiganeyaasha ay qoraan qalinlaydu iyo daabacaadda Manhajka Dugsiyada Somaliland. “Waxba yaanu xeerkay i marin, xoolona i sine, Xaasha’e nin libin kaa xistiyay, xumihi waa yaabe” Salaan Carrabay.
HEMA BOOKS waa shirkad ay salka u dhigeen muwaaddiniin reer Somaliland ah oo yoolkoodu yahay in ay dalka soo gaadhsiiyaan buugaagta faaiidada u leh ardayda, macallimiinta, cilmi-baadheyaasha iyo cid kasta oo danaynaysa inay kordhiyaan aqoontooda. Waxa markii kowaad la furay sannadkii 2009ka, waxaanay xarunteedu ahayd waageerka Masaajidka uu Ibraahin Dheere dhisay ee u dhaw Xabsiga Weyn ee Hargeysa. Runtii si wanaagsan ayuu u hirgalay higsigii iyo himiladii loo aasaasay HEMA BOOKS, waxaana ku xidhmay bahweynta danaynaysa aqoonta oo ka kooban qaybaha bulshada.HEMA BOOKS Ma aha dhawaan-dhalad la dhoodhoobay, balse waa xaruntaas muddada dheer soo jirtay.
Iyada oo HEMA BOOKS mar walba u heellan kobcinta iyo kor-u-qaadista aqoonta ummadda Somaliland waxa Warbaahinta Somaliland gaar ahaanna Wargeysyada lagu xayaysiiyay qandaraas ku saabsan daabacaadda buugaagta Manhajka u ah Dugisyada Somaliland, waxaana ogeysiiskaas baahisay Wasaaradda Waxbarashada Somaliland. Qandaraasku waxa uu ku soo baxay Wargeysyada dalka maalmihii Sooyaalku ahaa 20, 21, 22 iyo 23 Maarij ee sanadkii 2016ka. Waxaana si furan loogu bandhigay ummadda Somaliland iyo shirkadaha doonaya in ay ka qayb qaataan qandaraaska daabacaadda buugaagta Somaliland. Xaalado ku xeernaa Wasaaradda Waxbarashada iyo Haayadihii ka taageeri jiray daabacaadda Manhajka ayaa sabab u ahaa in la raadiyo muwaaddiniin xilqaadda daabacaadda buugaagta, kuwaas oo ku shaqeeya amarka, talada iyo aragtida Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska. Waxa ay ahayd markii kowaad ee Somaliland ay Manhajkeeda u daabacato si madax bannaan. Waana markii u horreysay ee taariikhda Somaliland la daabaco Manhajka Dusgiga Sare ee Somaliland tan iyo 1991kii. HEMA BOOKS waxa ay ka mid noqotay shirkadihii codsaday in ay u beretamaan Daabacaadda Buugaagta Somaliland, iyada oo ku kalsoon inay buuxinayso shuruudaha tartanka. Waxa qandaraaska ku tartamay shan shirkadood oo reer Somaliland ah, wasaaradda waxbarashaduna waxa ay u xushay guddi ka socda madaxda laamaha wasaaradda oo kala-saarta tartameyaasha. HEMA BOOKS waxa ay noqotay tartamihii ku guulaystay qandaraaska ee buuxiyay shuruudihii loo baahnaa oo dhan. Sidaas ayaana loogu xulay, looguna xulay daabacaadda buugaagta ardayda dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee Somaliland. Markii lagu dhawaaqay natiijadii tartanka waxa si rasmi ah heshiis u wada saxeexay HEMA BOOKS iyo Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Waxbarashada Somaliland Mudane Cabdillaahi Ibraahin Habbane oo xukuumadda masuul uga ahaa kobcinta waxbarashada. Intaas kaddib waxa heshiiskii laga ansixiyay Waaxda Garsoorka Somaliland. Heshiiska HEMA BOOKS ku xilqaadday daabacaadda buugaagtu waa midkaas waafaqsan sharciga iyo xeerka dalka u dejisan ee maray hannaankaas baahinta, kala-xulista, diiwaan-gelinta iyo sharciyaynta. Wuxuu qeexayaa hannaanka loo wada-shaqaynayo iyo dhammaan wixii looga baahnaa heshiis sharci ah oo dhex maraya xukuumadda oo ay wakiil ka tahay Wasaaradda Waxbarashada iyo HEMA BOOKS oo ah tartamihii ku guulaystay tartanka daabacaadda buugaagta qaranka ee dugsiyada. Markaas cadceed muuqata sacab laguma qarin karo. Sidaas ayaanay HEMA BOOKS ku bilawday daabacaaddii buugaagta Somaliland. HEMA BOOKS waxa ay wakhti badan ku bixisay dhammaystirka manhajka Somaliland iyada oo hadh iyo habeenba barbar taagnayd qoreyaashii manhajka, Waaxda Manaahijta iyo Guud ahaan Wasaaradda Waxbarashada. Maadaama oo xilliga Manhajka la daabacayo ay Somaliland ka jireen abaaro dal iyo dadba saameeyay, waxa ay HEMA BOOKS xitaa dusha u ridatay dhamaan qarashkii ku baxay qoraalka, dib-u-eegista iyo habaynta buugaagta Manhajka Dugsiyada Somaliland. Qoraalkii Manhajka Dugsiyada sare waxa uu bilaabmay March 2017ka, halka qoraalka buugaagta dugsiyada dhexena uu la kowsaday May 2017ka. Waxa lagu guulaystay in Manhajkii Somaliland ee cusbaa lagu bilaabo kal-aqooneedkii 2016-2017ka. Magaalo, degmo iyo tuulo kasta oo Somaliland leedahayna waxa la gaadhsiiyay buugaagtii Manhajka, waxaana masuuliyaddaas si hufan u gudatay HEMA BOOKS. Guulaha ka dhashay daabacaadda manhajka cusub waxa ka mid ahaa in ay Dugsiyada Somaliland heleen buugaag raadraac ah oo si siman u wada gaadhay dhammaan ardayda ku kala nool deegaannada kala duruufta iyo waayaha ah. Bareyaasha dugsiyaduna waxa ay heleen raadraac sugan oo ay ka tix raacaan casharrada ay ardayda u dhigayaan.
“Mana laha nin dooroo, Dayixii u soo baxa, Daammur baa la mariyaa, Mana waayo daabaqad, Iyo qaar la dabagala” Marxuun Gaarriye.
Dhammaan dugsiyada gaarka ah iyo kuwa dawliga ah ee Somaliland waxa ay ku qanceen inay adeegsadaan Manhajka Somaliland. Waxaanay u hoggaansameen amarkii Wasaaradda Waxbarashada ee ahaa in ardayda wax looga dhigo buugaagta ay Somaliland sida madaxa bannaan u daabacatay ee ay wakhtiga, maskaxda iyo maalka u hurtay soo-saaristooda. Nasiib-darro, waxa xuquuqdii daabacaadda ee buugaagta Manhajka Somaliland jebiyay Dugsiyo gaar loo leeyahay,Kuwaas oo daabacay buugaagtii tacabku ka galay Wasaaradda Waxbarashada iyo HEMA BOOKS. Waxa ku qoran casharradii manhajka oo sidii HEMA BOOKS u daabacday u dhigan. Waxa buugaagta la sawirtay ku xardhan magacyadii qoreyaasha Manhajka ee ka socday Wasaaradda Waxbarashada. Keliya waxa la tiray xuquuqdii badinta ee uu lahaa Xafiiska Manaahijta ee Wasaaradda Waxbarashadu, xaqdhawrkii HEMA, Ereygii Wasiirka iyo Hordhacii Qoreyaasha. Waxa aanu ummadda u bandhigi doonnaa buugaagta rasmiga ah ee ay HEMA BOOKS iyo Wasaaradda Waxbarashadu iska kaashadeen iyo kuwa uu dugsiga gaarka ahi u dhalan rogay sida xadgudubka ah. Si loo qariyo xad-gudubkaas laga galay qaranka iyo HEMA Books ba, waxa dusha nalaga saaray dhaleecayn iyo ceeb aanay HEMA gayin. Waxa wax laga xumaado ah in qof la garanayo yoolkiisa, cidda uu ka socdo iyo ujeeddada hadalkiisu uu iska dhigo mid nasteex u ah dalka iyo dadka Somaliland. Inkasta oo cidda na dhaleecaynaysaa isu dhigayso kuwo qaranka hiil u ah, waxa ayaan-darro ah in ay daadifeeyaan qaraarro ka soo baxay Maxkamadaha Somaliland. Taasina waxay gef ku tahay cid kasta oo xog-ogaal u ahayd heshiiska HEMA BOOKS iyo Wasaaradda Waxbarashada. Aniga oo aan jeclayn in aanu la yooyoontano ama u caytano sida kuwa daaha dabadiisa fadhiya ee masuul ka ah dhaleecaynta aan qiilka wadan ee HEMA BOOKS lagu durayo, waxa aan leeyahay waxa la gaadhay xilligii la tayayn lahaa dugsiyada dawladda, xilligii ay tacliintu toobiyaha toosan qaadi lahayd, xilligii laga xoroobi lahaa qof iyo koox afduuba aayaha waxbarashada ummadda. Waxanu uga mahadnaqaynaa M/weynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi sida geesinimada iyo deeqsinimada leh ee uu 20 february 2018 ugu dhawaaqay in xukuumaddu ay ardayda dugsiyada u iibin doonto buugaagta, isla markaana buugaag bilaash ah la gaadhsiin doono ubaxa dalka ee dhigta iskuullada dalka oo dhan. Taas oo ay shaqsiyaad dano gaar ah lihi saluug iyo sas ka qaadeen Tayaynta Dugsiyada Dawliga ah ee uu ballan-qaaday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Ma habboona in milgaha qaranka loo dhaawaco muraad uu qof leeyahay. Halkii ay HEMA BOOKS ka mudnayd mahadnaq, waxa nasiib-darro ah in lagu hafro waxqabadkii caddaanka ahaa iyo kaalintii ay Somaliland u buuxisay. HEMA waa “HIIL-QARAN”, waxaanay dhabarka u ridatey Masuuliyad ballaadhan oo ay mudan tahay in si milge iyo sharif leh loogu maamuuso hiilka ay qaranka Somaliland la barbar istaagtay. aan.
Somaliland: Daawo Hadaladdi Maxamed Kaahin,Axmed Mire,Cabdraxman Tolwaa,Maxamed Xaashi Ay Shalay Ka Jeediyeen Munaasibaddii Lagu Xusayay Maalinta Shuhadada SNM